Ukudangala kwezindawo ezishisayo kusabisa ngokucekela phansi iCosta Rica, iNicaragua neHonduras | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isikhathi seziphepho asikapheli. Kuze kube ngumhla ka-15 Novemba, kusenengozi enkulu yokwenzeka kweziphepho eziyingozi. Manje, ukucindezeleka kwezindawo ezishisayo kusongela ukubhubhisa iCosta Rica, iHonduras neNicaragua, amazwe asevele esebenze isexwayiso esibomvu ngenxa yezimvula ezinkulu.
Lolu hlelo, olwenziwe izolo ngoLwesithathu, seludale umonakalo futhi seluthathe nempilo yomuntu.
1 Ukulimala kokucindezeleka kwasezindaweni ezishisayo
2 Umkhondo wokudangala kwezindawo ezishisayo
Ukulimala kokucindezeleka kwasezindaweni ezishisayo
Ukucindezeleka kwaseTropical kuyinto engadala umonakalo omkhulu. EManagua, izolo kwakudingeka bakhiphe abantu bomdabu ababalelwa ku-800 abahlala eMisquitos Cays ngenxa yobungozi obukhulu bezimvula neziphepho, ezisongela imiphakathi yasogwini naseziqhingini zaseCaribbean. Empeleni, NgoLwesibili imvula enkulu ishiye umuntu eshonile eNicaragua: owesilisa oneminyaka engama-29 eshayela iloli, elathathwa umfula eMnyangweni osempumalanga weChontales.
Izikhulu ezintathu zezempilo zinyamalale ngoLwesithathu. Bebehamba nangeloli, eliwele emfuleni ngesikhathi bewela ibhuloho edolobheni laseJuigalpa, eChontales.
Kuze kube manje, bekungekho monakalo, kepha iNational Emergency Commission (CNE) yaseCosta Rica imemezele isexwayiso esibomvu ngoLwesithathu ezindaweni eziningi, kubandakanya nogu lwasePacific kanye naphakathi nezwe. Ngenkathi ukucindezeleka kungenakwenzeka ukuthinta ngqo isifunda, kuyenzeka kungadala ukwanda kokuvuvukala ogwini lwasePacific, ngaphezu kokuqinisa izimvula.
IHonduras, njengeCosta Rica, nayo ayikaze ilimale, kepha ihlala iqaphile. NgoLwesine kulindeleke ukuthi ifike ngasogwini lwaseNicaragua bese idlula empumalanga yeHonduras, ibuyele eCaribbean engxenyeni yayo esenyakatho-ntshonalanga ngoLwesihlanu.
EHonduras kuzokhipha ifu nemvula, ikakhulukazi enyakatho yezwe. Kulindeleke ukuthi baqinise kakhulu ngoLwesihlanu.
Umkhondo wokudangala kwezindawo ezishisayo
Ukucindezeleka kwaseTropical kulindeleke ukuthi kudlule ngeNicaragua naseHonduras, kuthi kusasa ngoLwesihlanu ifinyelele ogwini lwaseCaribbean eMexico. Ukusuka lapho, izoqhubeka nokuthuthela enyakatho, ifinyelele emaphethelweni aseningizimu-mpumalanga yesifundazwe saseMississipi, eningizimu ye-Alabama nasenyakatho-ntshonalanga yeFlorida njengesiphepho.
Sizoqhubeka nokubika noma yiziphi izindaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Ukudangala kwezindawo ezishisayo kusabisa ngokucekela phansi iCosta Rica, iNicaragua neHonduras